Cayaaraha Archives - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha September 27, 2021
(Paris) 27 Sebt 2021. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ayaa si buuxda maanta uga qayb qaatay tababarka buuxa ee ay sameynayeen xiddigaha kooxdiisa isagoo si wanaagsan kaga soo kabsaday dhaawacii jilibka kulankii Lyon ee dhacay 19-kii bishan September. Leo ayaa dhaawac ku seegay kulankii Sabtidii ay kooxdiisa la ciyaartay naadiga Montpellier kaasoo ka tirsanaa Sii akhriso
(Barcelona) 27 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si la yaab leh tababarkeeda waxaa maanta loogu arkay labo ka mid ah xiddigihii dhaawaca kaga maqnaa kuwaasoo muhiim u ahaa shaxda Macallin Ronald Koeman. Jordi Alba iyo Pedri ayaa saakay ka qayb qaatay tababarka buuxa ee ay naadiga isugu diyaarineyso ciyaarta Champions League ee ay Arbaca […]Sii akhriso
(Dortmund) 27 Sebt 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa carrabka ku dhuftay toddobo weeraryahan oo uu aaminsan yahay inay isaga ka wanaagsan yihiin xilligan, waxaana uu ka reebay xiddiga naadiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe. Gool dhaliyaha reer Norway ayaa aaminsan in xiddigaha kala ah Robert Lewandowski, Cristiano Sii akhriso
(Manchester) 27 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xagaagan ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo hanashada horyaalka Premier League kaddib markii ay si wacan ku bilaabatay xilli ciyaareedkan inkastoo kulankii ugu dambeeyay ay guuldarro kala kulantay naadiga Aston Villa oo 1-0 kaga adkaatay Sabtidii ciyaar lagu ciyaaray garoonkeeda Old Trafford. Balse Sii akhriso
(Paris) 27 Sebt 2021. Difaaca dadabka midig kaga ciyaara naadiga Paris Saint-Germain ee Achraf Hakimi ayaa sheegay inuu xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi uu leeyahay dabeecad uu aad ula yaabay taasoo ka duwan dhammaan xiddigaha kale ee PSG. Sidoo kale, Hakimi ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro xiddiga […]Sii akhriso
(Madrid) 27 Sebt 2021. Waxaa dhowaan la filayaa inuu garoommada kusoo laabto xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Toni Kroos kaasoo haatan dhaawac kaga maqan kooxdiisa ole’olaha bilawga ah ee 2021-22. Kroos ayaa la sheegay inuu haatan ku jiro soo kabasho wanaagsan isagoo tababar fudud la sameynaya safka Los Blancos isla markaasna rajeynaya inuu […]Sii akhriso
(Barcelona) 27 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa suuqii xagaaga si bilaash ah kula soo saxiixatay xiddigii hore ee Lyon, Memphis Depay kaasoo qalinka ugu duugay qandaraas labo sano ah. Warar kala duwan ayaa sheegaya inay Barca heshiiskaas ku dartay qodob u ogolaanaya inay hal sano oo dheeraad ah ku kordhiso qandaraaska Depay haddii ay […]Sii akhriso
(Turin) 27 Sebt 2021. Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay inay dhaawacyo kala duwan soo gaareen weeraryahannadiisa Paulo Dybala iyo Alvaro Morata kulankii shalay ay ka adkaadeen naadiga Sampdoria. Dybala ayaa dhaliyay goolkii koowaad ee ciyaartii ay Bianconeri ku adkaatay 3-2 kahor inta aanan dhaawac looga saarin ciyaarta, waxaana Macallin Sii akhriso
Cayaaraha September 26, 2021
(London) 26 Sebt 2021. Arsenal ayaa Cashar u dhigtay kooxda Tottenham oo marti ugu ahayd garoonka Emirates, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Arsenal. Daqiiqadii 12-aad kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay […]Sii akhriso
(Barcelona) 26 Sebt 2021. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Levante, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Barcelona. Daqiiqadii 6-aad kooxda Barcelona ayaa loo […]Sii akhriso